लकडाउनका कारण चियाकै बिक्री भएन, श्रमिकले समेत तलब पाएनन्
इलाम । मुख्य सिजनमै बन्दाबन्दी भएपछि चिया क्षेत्रले लाखौँको घाटा व्यहोर्नु परेको छ । चियाकै राजा पहिलो टिपाइ बेच्ने समयमा कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी भएपछि एकातिर किसानले चिया टिपेर प्रशोधित क्षेत्रसम्म पुर्याउन सकेनन् भने अर्कातिर उद्योगमा प्रशोधन गरिएको चिया पनि बजारमा...
हिमालय एयरलाइन्सले नेपालीको उद्धार उडान तालीका सार्वजनिक, यात्रुको पीसीआर वा आरडीटी परीक्षण अनिवार्य
एनएमबी बैंकले आईएफसीबाट २५ मिलियन डलर कर्जा भित्र्याउने
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ‘नेपालको ग्रेटवाल’ बन्दै, तीन अरब ५० करोड बजेट लाग्ने
सिन्धुपाल्चोक ।पर्यटकीय दृष्टिले चर्चित सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा हिमालयन हेलम्बु ग्रेट ट्रेल (पदमार्ग)निर्माण गर्ने कार्यक्रमअनुसार चालु वर्ष २६० मिटर काम सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष एक सय १० मी काम भएको थियो । यस वर्ष शेर्माथाङ र नागीडाँडास्थित बुद्धपार्क दुवैतिरबाट...
ब्याजको पुनःविचार गर्न माग
लोकसंवाद संवाददाता, असार १७, २०७७
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले यातायात सञ्चालन नभएको समयमा बैंकको कर्जा, सवारीसाधनको विभिन्न कर छुटको माग गरेको छ । महासङ्का अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य नेतृत्वमा गएको महासङ्घको टोलीले अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई आज मन्त्रालयमा विज्ञप्ति बुझाउँदै यातायात व्यवसायमा रहेका समस्या...
नेप्सेमा सकारात्मक सर्किट, ७५ अङ्कले बढ्यो
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ६ प्रतिशतले बढेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आजका लागि कारोवार स्थगन गरेको छ । स्टकका अनुसार मङ्गलबारकै लयमा नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै कारोवार स्थगन भएको आज दोस्रो दिन हो । कोरोनाको कारण...
सौराहाका क्वारेन्टिन होटल
चितवन । सौराहाका व्यवसायीले होटललाई क्वारेन्टिनका रुपमा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईको होटलमा अहिले विदेशबाट आएका पूर्वी चितवनको जयमङ्गलाका दुई जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । काठमाडौँ, पोखरापछि तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको यस क्षेत्रमा...
सुनको अर्को रेकर्ड मूल्य
काठमाडौं । लकडाउनयता दैनिकजसो रेकर्ड कायम भइरहेको सुनको मूल्यमा आज फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज ९बुधबार० छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँ बढेर ९१ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, जुन...
लुभूमा खानेपानी पाइप लाइन विस्तार
ललितपुर । महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ८ लुभूबाट विष्णुडोल, बखन्नी चोक, न्याठ टोल हुँदै गोदावरी खोला तथा लुभूतल्लो चौतारादेखि गोदावरी पुलसम्मको तीन सडकखण्डमा खानेपानी पाइप लाइन विस्तारको काम भइरहेको छ । ललितपुर क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णलाल महर्जनले...
प्रतितोला सय रुपैयाँ घट्यो सुनको भाउ
लोकसंवाद संवाददाता, असार १६, २०७७
काठमाडौं( सुनको भाउ आज, असार १६ गते मंगलबार)घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला सय रुपैयाँ घटेर ९१ हजार दुई सय रुपैयाँ कायम भएको छ। गत सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार तीन सय...
असार १५मा साढे पाँच करोडको दही बिक्री
काठमाडाैं । दहीचिउरा खाने दिनका रुपमा हेरिएको असार १५ गते साढे पाँच करोड रुपैयाँ को दही बिक्री भएको छ । निजी क्षेत्रका डेरी व्यवसायी र सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुग्ध विकास संथान (डिडिसी)बाट पाँच करोड ४६ लाख ६० हजार रुपैयााँको दही...
बर्दियाकाे केरा खेतीमा कोत्रे र गबारो कीरा
राजापुर । केरा उत्पादन क्षेत्रका रूपमा परिचित हुँदै गएको बर्दियामा केरा खेतीमा कोत्रे र गबारो कीराको समस्या देखिएको छ । केरामा हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि उक्त कीराको प्रकोप देखिएपछि किसानमा लगानी खेर जाने चिन्ता लागेको छ । यस वर्ष...
बिजुली पुग्यो नरैनापुरमा
बाँके । बाँकेको दुर्गम क्षेत्र नरैनापुर गाउँपालिकामा विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युतकाे तार तान्ने काम सम्पन्न भएपछि आइतबारदेखि परीक्षणका लागि करेन्ट प्रवाह गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश ५ डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुनेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार...
एक सदस्य एक फलफूल अभियान
कास्की । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीमा एक सदस्य एक फलफूल कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नदी किनारका जमीन, बेँसी, टार तथा खेतबारीका कान्लामा सम्भाव्य फलफूल खेती गरी यसको उत्पादन बढाउँदै आत्मनिर्भरताका लागि प्रत्येक घरधुरीमा...
कृषिविज्ञ राईको सलह किन्ने घोषणा: किलाेकाे १ सय, हजार किलोको एक लाख !
खोटाङ । कृषिविज्ञ मदन राईले प्रतिकिलो १०० मा सलह खरिद गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । भारतबाट तराई प्रवेश गरेको सलह खोटाङका विभिन्न स्थानीय तहमा शनिबार एकैसाथ देखिएपछि कृषिविज्ञ राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिकिलो १०० मा खरिद गर्ने बताउनुभएको हो ।...
६५ लाख रुपयाँ सहित बाटोमा हिँड्दै गरेका शङ्कर सिंह र रमेश सिंह पक्राउ !
काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीले स्रोत नखुलेको ६५ लाख आठ हजार नगदसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । महानगरीय प्रहरीवृत्त कालिमाटीको टोलीले स्रोत नखुलेको उक्त रकमसहित भारतीय नागरिक शङ्कर सिंह र बारा जितपुरका रमेश सिंहलाई २०७७ असार १५ गते साेमबारकाठमाडौँ...
काठमाडौँ । सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसात अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम ठेक्का सम्झौतानुसार काम गरेर भुक्तानीका लागि पेश भएको बिलको रकम हो । यो महिनाको अन्तिमसम्ममा थप पाँचदेखि सात अर्ब रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको...
कास्की । धान विज्ञले यस वर्ष कास्कीमा धान उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । अनुकूल मौसमका कारण अघिल्ला वर्षभन्दा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञानकेन्द्र स्याङ्जाका प्रमुख शालिकराम अधिकारीले बताउनुभयो । यस वर्र्ष कास्कीमा धान...
दाना सवस्टेशनको ताला चार दिनपछि खुल्यो
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका३ दानामा निर्माणाधीन २२० केभी क्षमताको सवस्टेशनको प्रवेशद्वारमा स्थानीयवासीले लगाएको ताला चार दिनपछि खुलेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार भएको छलफलमा स्थानीयवासीले उठाएका सामाजिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित केही माग पूरा गर्ने विषयमा आयोजना र दानावासीबीच सहमति...
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक ९एडिबी० ले नेपालको विद्युत् आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न नेपाललाई रु २२ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यहाँस्थित एडिबीको देशीय कार्यालयका अनुसार नेपालको विद्युत् आपूर्ति क्षमता विस्तार, गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार,...